Dating soso-kevitra. Inona no tokan-tena ny vehivavy te?
amin'ny David Shade
Raha manontany ny vehivavy izay tiany izy, izy no mamaly amin'ny alalan'ny fiezahana mba hamaritana ny zavatra tiany ao amin'ny olona. Ary matetika izy no olana izay mamaritra fa. Dia tsy afaka mihitsy ny mamaritra ny tena izy dia mila.
Rehefa mandinika tsara ny vehivavy eo amin'ny fifandraisana, hitanao fa misy fifandraisana dia po sy mahomby kokoa noho ny hafa. Fa ny fifandraisana mahomby, ny vehivavy dia mahazo ny zavatra rehetra izay ilainy. Ao ny fifandraisana izay tsy manatanteraka, iray na maromaro amin'ny zavatra ilain'ny vehivavy tsy ho nihaona.
Mahafantatra izy rehefa misy zavatra tena ilaina no Tsy Ampy eo
Rehefa mandinika tsara ny vehivavy izay nandeha tany ivelany ny fanambadiana, hitanao fa izy ireo no nahazo izany izy ireo izay tsy hita ao amin'ny fanambadiany. Ohatra, raha ny firaisana ara-nofo dia mankaleo, dia hahazo mampientam-po tia. Raha ny firaisana ara-nofo ao amin'ny fanambadiana dia azo ekena, fa izy dia mahatsapa fa izy dia hitany hoe entina amin'ny fanajana, izy no hahita ny olona izay hitondra azy amin'ny fanajana. Rehefa mivoaka ny vehivavy ny fanambadiana, izy ireo mitady ny iray na mihoatra ny ilainy nihaona. Ho an'ny vehivavy sasany, raha mila olona roa samy hafa mba hahazoana ny zavatra ilaina rehetra nihaona, Aleo fa hataoko izany izy.
Mahaliana, amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra, ny vehivavy dia tsy nitady ny mivoaka ny fanambadiana. Izy ireo ihany no nahalala fa tsy faly izy ireo. Lasa mora ny fandrosoan'ny olona hafa ary avy eo dia nisafidy ny hiaraka aminy.
Ho an'ny ankamaroan'ny vehivavy, raha tsy nahazo ny zavatra ilaina rehetra nihaona, izy dia miala tanteraka ny lehilahy sy hitady olona izay mahay manatanteraka azy. Saingy tsy fantany fa izany satria tsy nahazo ny zavatra ilaina rehetra ny nihaona, izy ihany no mahalala izay zavatra momba ny fifandraisana dia tsy tia.
Ny vehivavy tsy mahalala izany, ary ny ankamaroan'izy ireo dia tsy azo antoka fa afaka hanazavana izany, fa ny vehivavy mila zavatra efatra mba ho tanteraka.
Misy efatra Zava-dehibe ilain 'ny vehivavy iray
Voalohany, dia mila mahatsapa nankasitraka ny tsy manan-tsahala olona fa izy no. Dia mila mahatsapa manokana, Tsy mitovy amin'ny vehivavy hafa. Ary izy dia mila mahafantatra fa ny olona manohana azy tao amin'ny ezaka.
Faharoa, dia mila mahatsapa fa akaiky-pihetseham-po lalina fifandraisana. Ary ilainy ny manana izany fihetseham-po ny olona akaiky. Tena mizara ihany izy fifandraisana aminy.
Fahatelo, dia mila mahatsiaro ho toy ny vehivavy. Dia mila mahatsapa tsara tarehy, sexy, ary iombonana. Ary ilainy ny hankafy ny zavatra rehetra izay avy amin'ny maha-vehivavy.
Ary farany, mila mafana izy mpankafy firaisana ara-nofo. Ary ilainy ny ho voafitaka, voafitaka ny, Nananihany, ary afa-po, hatrany hatrany. Ary ilainy ny hiaina zava-baovao, amin'ny fomba vaovao, anisan'izany ny nofinofy sy ny andraikitra. Dia mahatonga azy hahatsapa velona.
Ny vehivavy no tena tanteraka, saingy efa tamin'ny lehilahy iray izay manana ny zava-drehetra izy amin'ny, , saingy efa tamin'ny lehilahy iray izay izy wildly adala ny. Fa zara raha mitranga. Matetika, iray na mihoatra ny zavatra tsy ampy.
Ohatra samihafa Men In A vehivavy ny Fiainana
Andeha isika hijery ny olona isan-karazany fa ny vehivavy no miaraka amin 'ny fiainany. Nihaona tamin'ny olona isan-karazany sasany ny zavatra ilaina, fa tsy izy rehetra.
Ohatra, Handeha ary horaisintsika ny ratsy rehetra mahazatra malaza zazalahy. Ny ratsy dia manome ny mampientam-po zazalahy firaisana ara-nofo. Ary satria tena iombonana, dia mahatonga azy hahatsapa sexy. Fa izy dia tena variana jerk izay cheats azy. Izy no tsy hahatsiaro ho ankasitrahana, ary izy angamba no tsy afaka mahatsapa na inona na inona-pihetseham-po fifandraisana. Matetika izy lasa mpifoka azy, satria ny firaisana ara-nofo no tena tsara sy tena izy dia mahatsapa izany firaisana ara-nofo. Hiezaka izy foana ny nahafolaka azy, nefa vokany. Pihetseham-po ao amin'ny iray fisarahana, farany nandao Azy izy noho ny soa. Raha kely indrindra dia tena avo fanajana ny vehivavy tamin'ny farany nandao Azy ny tsara.
Avy eo dia misy ny malaza ho tsara wimp lehilahy. Dia mahatonga azy hahatsapa nankasitrahany, ary izy no afaka hanorina fifandraisana pihetseham-po aminy. Indrisy anefa fa na dia, dia ny mankaleo, na dia ny tsy iombonana, ka dia tsy mahatsiaro ho sexy, ary tsy hahatsiaro ho nihodina momba ny firaisana. Te izy tia ny hanambady azy, satria Te ho tanteraka ho iray fianakaviana, fa noho ny antony Mihazona ela ny firotsahana. Dia satria tsy manao azy toy ny firaisana ara-nofo hahatsapa zavaboary.
Tamin 'ny ponao Guy
Ny akaiky indrindra dia mety hahazo ny fifandraisana tsara indrindra dia ny fihetseham-po tamin 'bandy. Izy, tsy misy wimp, ary tsy misy jerk. Mety ho lehilahy sy hanome ny tsara firaisana ara-nofo. Mety ho lehilahy sy anaovany ny mahatsiaro tena nankasitraka. Mbola misy zava-dehibe tsy hita. Pihetseham-po izy, tsy misy. Mahatsapa po na oviana na oviana izy mifandray aminy. Ity angamba no lehibe indrindra fitarainana vehivavy. Dia nahita lehilahy tsara indrindra amin'ny lafiny rehetra, fa Lety eee izany, dia tsy misy fihetseham-po. Izy dia miezaka hatrany ny hitondra azy mba hiresaka taminy, fa tsy mitranga. Pihetseham-po ny vehivavy dia zavaboary, ary mila azy, ka dia mamela farany.
Misy ny olona hafa eo amin'ny fiainany. Misy pelaka ny namana. Tiany mihantona avy aminy satria mahatonga azy hahatsapa sexy ary tena mahatonga azy hahatsiaro ho nankasitrahany. Manana be dia be mitovy amin'ny azy, fa Lety eee izany, dia ny pelaka, ary dia toy izany no tsy safidy.
Ny dikan'ilay Lover
Ary avy eo misy ny tsindraindray mifono mistery tia. Noho ny antony maro dia tsy tiako ve mihevitra azy ho zava-dehibe na inona na inona, fa manambitana, ny firaisana ara-nofo tsara. Indray mandeha isaky ny volana vitsivitsy, , saingy efa leo amin'ny fomba zava-mitranga ho azy, Ho niantso azy izy ka hita fa zavatra iray, ary zavatra iray ihany no. Fa ny firaisana ara-nofo. Avy eo dia ravina manantena tsy ho ela dia hahita ny tonga lafatra ny olona.
The manambady Man
Ary farany, toy ny ohatra farany, misy ny manambady olona. Ihany no tena misy vidiny ambany dia ambany ny vehivavy manaiky ho tonga tompovavy, na amin'ny teny hafa, ny vehivavy izay te izay izy tsy afaka ny hanana. Andriamanitra dia manome ny mampientam-po firaisana ara-nofo, dia mahatonga azy hahatsapa sexy, izy ireo mizara ny fihetseham-po lalina fifandraisana. Fa tsy handao ny vadiny. Ka dia tsy mahatsiaro manokana. Ary satria izy dia mahatsiaro tena ho tsinontsinona, dia tena sarotra ho azy ny hiala.
Fa aoka ny hiverina any ambony fanajana tena ny vehivavy.
Raha izy irery ihany no afaka Mila rehetra mbamin'izay nety
Izany, ireo ohatra ireo ny olona eo amin 'ny fiainany. Araka ny hitanao izao, ny iray na mihoatra ny zavatra nilainy ny tsy nahavitana isaky ny ohatra. Sary an-tsaina fa raha afaka hihaona ny lehilahy iray nihaona mora foana ny zavatra nilainy ny rehetra. Ny olona izay nanao azy hahatsapa hoe ankasitrahana. Nisy lehilahy iray izay lalina evoked-po mahery vaika momba azy. Ny olona izay manao azy hahatsapa Anarana sy womanly sy sexy. Nisy lehilahy iray izay manome azy mpankafy mafana firaisana ara-nofo. Ankehitriny izay ho milay.
Izany no fahaizany Lover. Ary Izy dia mahery nefa malemy fanahy. Marina nefa mandanjalanja. Nefa iombonana-pihetseham-po. Fanapahan-kevitra nefa malefaka. Tanjona mirona mbola tonga ho azy. Voatosika mbola manome. Lehibe indrindra, nefa tsaina dia. Ary manome ny an'ala nikiakiaka orgasms.
Izany ny karazana nofinofy momba ny zavatra vehivavy.
Efa ho ny ifantohan'ny ny fikarohana ho an'ny farany 15 taona, ary efa voarakitra ao amin'ny bokiko, “David Shade ny fahaizany Manual Lover.” Azonao atao ny mamaky bebe kokoa momba ny boky teo amin'ny namany Sary.
Manome fahafinaretana ny vehivavy tsy mampino,